Vaovao - Fa maninona ny iPhone tsy misy fiampangana tsy misy tariby no miato na tsy afaka mandoa?
Mpanjifa maro no nanontany anay momba ny fiatoana na ny tsy fahombiazan'ny fiampangana ny iPhone mandritra ny famandrihana tsy misy tariby. Izany ve no olana amin'ny iPhone na ny charger? Afaka mamaha ny olan'ny fiampangana tsy misy tariby iPhone ve isika?
1. Hamarino raha toa ka ao amin'ny faritra famandrihana tsy misy tariby
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny charger tsy misy tariby dia manana endrika coil vitsivitsy. Apetraho eo amin'ny toerana voatondro ny iPhone hahafahana mamatsy vola. Mety ilaina ny manamarina raha apetraka araka ny tokony ho izy izany, raha mitranga tsindraindray, mety tsy apetraka tsara, azonao atao ny manandrana manova ny zoro Na mahita ny toerana famandrihana tsara indrindra ho an'ny fiampangana tsy misy tariby.
Ankoatra izany, indraindray rehefa misy fampandrenesana na antso ho avy, ny fampandehanana ny vibration dia hahatonga ny iPhone hihetsika ary hampitsahatra ny charger. Manoro hevitra ny hamono ny vibration rehefa mamaly.
3. Hamarino raha mirehitra ny jiron'ny charger tsy misy tariby
Mandritra ny famandrihana tsy misy tariby, matetika ianao dia afaka mahita ny famantarana famandrihana amin'ny charger tsy misy tariby. Raha tsy mirehitra ilay izy, azafady hamafiso raha mandeha ny tady herinaratra.
5. Miova amin'ny charger tsy misy tariby hafa
Indraindray dia mety noho ny olana amin'ny charger tsy misy tariby. Raha manana charger an-tariby hafa ianao dia afaka manandrana iray hafa. Raha azo ampandoavina dia misy olana ny charger tsy misy tariby. Raha tsy izany dia afaka mividy aminay ianao. Afaka miantoka aho fa afaka manolo ny charger tsy misy tariby an'ny LANTAISI ary ho lasa iray amin'ireo charger ankafizinao amin'ny ho avy.
2. Hamafiso fa ny Qi Wireless Charging dia tohana
Rehefa misafidy charger tsy misy tariby dia asaina misafidy charger tsy misy tariby miaraka amin'ny fanamarinana Qi ianao. Ho fanampin'izany, ny mari-pamantarana bebe kokoa, ny lehibe kokoa ny fahefan'ny charger tsy misy tariby an'ny orinasa ary ny fiarovana azy.
4. Tsy afaka manefa mihoatra ny 80% ny karatra herinaratra
Raha hita fa tsy azo fehezina tsy tapaka ny iPhone rehefa feno 80%, dia satria ny bateria iPhone dia mafana loatra ary miasa ny rafitra fiarovana, izay hametra ny fiampangana rehefa mahatratra 80% ny herinaratra. Amin'izao fotoana izao, mila mametraka ny iPhone amin'ny toerana mangatsiatsiaka ianao, ary avereno averina averina rehefa mihena ny mari-pana, dia azonao atao ny manohy mamaly azy.
Rehefa avy nanandrana ireo fomba 5 voalaza etsy ambony ireo dia mbola tsy azo ampangaina ny batterie, izany hoe misy olana amin'ny fitaovana, ny dikan-teny taloha an'ny iOS dia mety tsy manohana tsara kokoa ny fiampangana tsy misy tariby iPhone, afaka manandrana manavao ny iPhone amin'ny iOS farany isika. version na ny telefaonina dia azo averina any amin'ny foibe ihany mba hanamboarana. Fanazavana fanampiny, azafady mba mifandraisa aminay.